Vaovao - Ny angovo dia mifantoka amin'ny sehatry ny fifandraisana sy amin'ny nea
Ny angovo dia mifantoka amin'ny sehatry ny fifandraisana sy amin'ny nea
Ny fizotry ny arc, ny root arc dia mamokatra ny fizotran'ny fiasa ara-batana noho ny famoahana angovo mifatotra eo amin'ny sehatry ny fifandraisana sy eo ambonin'ny sosona ambonimbony, ateraky ny fiempoana sy ny fitrandrahana ireo fitaovana fifandraisan'ny volafotsy, izany dia ny fanesorana ny herinaratra.
Ao anatin'ny fotoana fohy kely sy fohy ankehitriny, eo ambanin'ny fikajiana herinaratra, indrindra ao amin'ny loharanom-pahavoazana micro micro local local pool ao anaty pisinina molten. Miaraka amin'ny fanitarana ny fiakarana ankehitriny sy ny ora fandefasana, amin'ny alàlan'ny fananganana minisiteran'ny vy ny metaly anidina ao amin'ny dobo fantsom-bozaka, ary ny etona mahery vaika sy ny fikorianan'ny vy. Ho fanampin'izany, ny fanamafisana ny fakany arc dia hiteraka ny fitomboan'ny hakitroky ankehitriny, ny mari-pana amin'ny fotony, izay miteraka fihenan'ny rano sy ireo fitaovam-pifandraisana. Ny fiantraikan'ny mari-pana amin'ny fanoherana ny fifandraisana dia sarotra kokoa. Rehefa mitombo ny mari-pana dia nitombo ny fanoherana ny fitambarana, nefa tamin'izany dia nitombo ny maripanan'ny fiovan'ny toetran'ny micro vokatry ny fihenan'ny herin'ny mekanika sy ny fanoherana. Ho fanampin'izany, noho ny sosona ambonin'ilay sarimihetsika matetika dia manana toetra mampiavaka ny semiconductor ary hihena ny fanoherana ny manify amin'ny fiakaran'ny maripana, fa ny hafanana kosa dia afaka hanafaingana ny sosona horonantsary ao amin'ny tontolon'ny fizotran'ny fitomboana, ka hitombo ny fanoherana ny fifandraisana, mora may ny volafotsy .
Amin'ny herinaratra mandritra ny fotoana fohy, ny mari-pana amin'ny tontolon'ny fifandraisana dia miakatra haingana, etsy ankilany noho ny andry eo akaikin'ny tsipika misy ankehitriny, tapaka tampoka vokatry ny fifandraisan'ny herin'ny herinaratra, miteraka arofohy fohy, tranga roa no hitarika hifandray amin'ny mitsonika, ny valiny dia ny welding welding. Rehefa ny ony amin'ny alàlan'ny fantsom-pifandraisana dia manakaiky ny sandan'ny kritika, ny fangejana ny fusion dia mihatra amin'ny lafiny sasany. Ny fifandraisana amin'ny volafotsy sy ny fifandraisana dia misy fiantraikany mivantana amin'ny fitondran-tena. Eny ambonin'ny sy ny heterogeneity sosona manify dia mety miteraka fanatsarana ny fantsom-bozaka. Ireo fitaovana fifandraisana mifototra amin'ny volafotsy misy fahombiazana bebe kokoa amin'ny indostrian'ny herinaratra dia misarika ny sain'ny rehetra, saingy noho ny fitaoman'ilay tsipika dia tsy azo ihodivirana ny fametahana fantsom-pifandraisana sy ny fikaohon-tany na dia ny fandroahana sy ny fitondran-tena tsy fahombiazana aza, manimba ny ain'ny singa elektrika.
Ny fomba hisorohana ny tsy fahombiazana dia hitranga dia lafiny iray lehibe amin'ny fampivoarana ireo fitaovam-pifandraisana volafotsy, mpikaroka maro avy amin'ny fanampiana singa hafa toa ireo singa tsy fahita eto an-tany hanatsarana ny zava-bitany, ary nahazoana zava-bita sasany, tokony hatao amin'ny ho avy atomboka amin'ny ny teôria hanatsarana ny fahombiazan'ny fifandraisana mifototra amin'ny volafotsy amin'ireo singa elektrika.
Fotoana fandefasana: Jul-07-2020